Climate Change | Radio Veritas Asia
ဘဥဃးဒီးပီဥလဲဥမိႈပွႈန႔ဥ ဟီဥခိဥဖ်႕ဥဒီတဖ်႕ဥပူၚအဂီႈ မ့ဥဒဥထံအအါကတ႕ႈဒီးလီၚလႈကြံဏ၀ဲအဖီခိဥ တႈအါအါ ဂီႈဂီႈလ႕မ့ႈ၀ဲ တႈအိဥလ႕ထံလဏ ဒ့ဥဖိ ညဥဖိအကလုဏကလုဏသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲဒဥအါအါဂီႈဂီႈန႔ဥလီၚ. တႈအိဥလ႕ထံလဏ တႈသးသမူ...
ထံဆ႕လ႕အခုဥ အဂ့ႈ ၉.၅.၂၀၂၂
လ႕ကိးမုႈနံၚဒဲးအပူၚ ဘဥထြဲဒီးခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥအဂ့ႈ ၂၅.၄.၂၀၂၂
တႏြံဒီးတႏြံ လ႕တႏြံညါအံၚ ပသးအိဥပဏဖ်ါထီဥန႔ႈကဒီးသု ဘဥဃး ဒီးခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥ အဂ့ႈတစဲးဖိ တုၚအိဥကဒီး ပွၚလံန႔ဥလီၚ. တႏြံညါအံၚ လ႕ကိးမုႈနံၚဒဲးအပူၚ ဘဥထြဲဒီးခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥအဂ့ႈ ဆံးကိဥဖိ ဒီးပအဲဥဒိးပဏဖ်ါထီဥ ဘဥန႔ႈကဒီးသုန႔...
န႔ဆ႕ဥန႔ဥ ပကဘဥကတီၚက့ၚအီၚ ဒ္န႔ဆ႕ဥအသိးလီၚ ၁၈.၄.၂၀၂၂
ခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥအတႈဟးဂုဏဟးဂီၚဒီး ဆူညါ တႈဂ့ႈကီလ႕ ကဟဲပိဏထြဲထီဥအခံသ့ဥတဖဥအဂ့ႈ11.4.2022
ခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥအတႈဟးဂုဏဟးဂီၚဒီး ဆူညါ တႈဂ့ႈကီလ႕ ကဟဲပိဏထြဲထီဥအခံသ့ဥတဖဥအဂ့ႈ. ဒီပုႈ၀ဲႈခဲလ႕ဏသ့ဥဧ႕ ဘဥဃးဒီးခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥအတႈဟးဂီၚန႔ဥ ပ၀ဲပွၚဟီဥခိဥဖိသ့ဥတဖဥ တ႕ပီဥသကိး၀ဲ ကတိၚသကိး၀ဲဒီး ကြဲးဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕အတႈကြဲးအပူၚယပဏဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥလ႕က်ဲအဘိဘိလီၚ. ဘဥမနုၚ...
တႈသူဥမံသးမံ အတႈအိဥမူန႔ဥပကဘွီထီဥတန႔ႈ၀ဲ အဂ့ႈ ၄.၄.၂၀၂၂
တႏြံဒီးတႏြံ လ႕တႏြံညါအံၚ ပသးအိဥပဏဖ်ါထီဥန႔ႈကဒီးသု ဘဥဃး ဒီးခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥ အဂ့ႈတစဲးဖိ တုၚအိဥကဒီး ပွၚလံန႔ဥလီၚ. တႈခိဥတီတခီမ့ႈ၀ဲ တႈသူဥမံသးမံ အတႈအိဥမူန႔ဥပကဘွီထီဥတန႔ႈ၀ဲ အဂ့ႈ ဆံးကိဥဖိ ဒီးပအဲဥဒိးပဏဖ်ါထီဥ ဘဥန႔ႈကဒီးသုန႔ဥလီၚ....
ခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥန႔ဥ လ႕ပကဘဥႀတီဆ႕အီၚကန႔ႈ၀ဲ လ႕ပွၚကညီ တႈအိဥ တႈဆိး တႈအဒိအတဲဏသ့ဥတဖဥ ၂၈.၃.၂၀၂၂
တႏြံဒီးတႏြံ လ႕တႏြံညါအံၚ ပသးအိဥပဏဖ်ါထီဥန႔ႈကဒီးသု ဘဥဃး ဒီးခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥ အဂ့ႈတစဲးဖိ တုၚအိဥကဒီး ပွၚလံန႔ဥလီၚ. ခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥန႔ဥ လ႕ပကဘဥႀတီဆ႕အီၚကန႔ႈ၀ဲ လ႕ပွၚကညီ တႈအိဥ တႈဆိး တႈအဒိအတဲဏသ့ဥတဖဥ ဆံးကိဥဖိ ဒီးပအဲဥဒိးပဏဖ်ါထီဥ ဘဥန႔ႈ...
ပွၚကညီဒီးခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥ ဘဥထြဲဒီးအတႈရ့လိဏအသး ဒီးဒုးနႈပ႕ႈဂ့ၚထီဥအါထီဥတႈရဲဥ တႈက်ဲၚအဂ့ႈ ၂၁.၃.၂၀၂၂
တႏြံဒီးတႏြံ လ႕တႏြံညါအံၚ ပသးအိဥပဏဖ်ါထီဥန႔ႈကဒီးသု ဘဥဃး ဒီးခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥ အဂ့ႈတစဲးဖိ တုၚအိဥကဒီး ပွၚလံန႔ဥလီၚ. တႏြံညါအံၚ ပွၚကညီဒီးခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥ ဘဥထြဲဒီးအတႈရ့လိဏအသး ဒီးဒုးနႈပ႕ႈဂ့ၚထီဥအါထီဥတႈရဲဥ တႈက်ဲၚအဂ့ႈ ဆံးကိဥဖိ ဒီးပအဲဥဒိးပဏဖ်ါထီဥ ဘဥန႔ႈကဒီးသုန႔ဥလီၚ.
ဟီဥခိဥဒီဖ်႕ဥ ကဃံလၚအဂီဥ အဂ့ႈ ၁၄.၃.၂၀၂၂